Amaqhinga amahlanu okuthatha ithuba ngeTelegram kwi-Android | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Ukukopela kwe-Android
Yocingo yenye izicelo ethandwa phakathi abasebenzisi Android. Kwabaninzi, sesona sicelo sokuthumela imiyalezo kwintengiso yanamhlanje. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisixhobo esigqibeleleyo. Ukongeza, kuphakama ukunika abasebenzisi iinketho ezininzi zokwenza ngokwezifiso, ezibavumela ukuba bafumane okungakumbi kuyo.
Ke ngoko, apha ngezantsi sikushiya netotali amaqhinga amahlanu ahlukeneyo anokusebenzisa iTelegram ngendlela engcono kwi-smartphone ye-Android. Ukuze ufumane okungcono kwesi sicelo semiyalezo. Uhlelo lokusebenza oluncinci luzuza ubukho kubulelwe kukhetho lwalo oluninzi, Njengeebhot yakho.
1 Khusela imiyalezo ngekhowudi
2 Hlela izihloko
3 Guqula iphepha lodonga kwiincoko
5 Ukuzitshabalalisa kweakhawunti
Khusela imiyalezo ngekhowudi
I-Telegram ibisoloko isisicelo esime ngaphandle ekukhuseleni ubumfihlo babasebenzisi kangangoko kunokwenzeka. Ngale ndlela, basinika uninzi lwezinto ekunokukhethwa kuzo xa kuziwa ekukhuseleni ukusetyenziswa kweapp. Ke ngoko, sinokubakho ngenisa iPIN khowudi ukukhusela izingxoxo zakho kwisicelo ngendlela elula. Oku kuyasivumela ukuba kungabikho mntu uya kufumana iincoko esinazo ngaphandle kwemvume yethu.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ufake useto lwesicelo. Ngaphakathi kubo kuya kufuneka ungene kwicandelo labucala nokhuseleko, apho sikhona kunye necandelo elibizwa ngokuba yiKhowudi yokuFikelela. Kukweli candelo apho iTelegram isivumela ukuba sisebenzise ikhowudi yokhuseleko okanye iminwe yeminwe ukuvimba izingxoxo. Inqaku eliza kufakwa nguWhatsApp kungekudala.
Yocingo iza uthotho imixholo ngokungagqibekanga kwisicelo. Kodwa abasebenzisi banethuba lokutshintsha le mixholo okanye bazenzele ezabo. Ukuze ukubonakala kwesicelo kwenziwe ngokwezifiso ngawo onke amaxesha kwaye ngaloo ndlela kusetyenziswe ngendlela efanelekileyo kubasebenzisi. Yinkqubo esele siyichazile kuwe.
Ngale ndlela, imibala yemivalo yesimo, izicatshulwa, okanye iimenyu kwisicelo zinokutshintshwa. Yinkqubo ekufuneka yenziwe ngenkathalo, kodwa eya kuvumela a ukujonga okungakumbi okwenzelwe wena. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba uhlele imiyalezo kwi-app kunye zenze zibonakale.
Guqula iphepha lodonga kwiincoko
Olunye lweempawu ezintsha zeTelegram, efike kolunye uhlaziyo lwamva nje. Abasebenzisi banikwa ithuba loku lungisa iphepha lodonga leencoko. Ke kunokwenzeka ukuba ukhethe imali ofuna ukuyisebenzisa. Kuyenzeka ukuba usebenzise imvelaphi ekhethwe sisicelo ngokwaso, layisha iifoto kwigalari okanye ukhangele iifoto ezikwi-intanethi. Ngaphandle kwamathandabuzo, inyathelo elinye lokwenza ngokwezifiso usetyenziso kwi-Android.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ufake useto lwesicelo. Kwiseto kukho icandelo eliliisetingi zengxoxo, apho kufuneka singene khona. Kuyo, iTelegram isinika iindlela ezininzi. Enye yezi ndlela kukutshintsha imvelaphi yengxoxo. Ke unokukhetha leyo uyifunayo.
Iitshaneli zezinye zezinto ezibalulekileyo zeTelegram. Bayakuvumela ukuba ugcine unolwazi ngezihloko ezininzi okanye ube nokufikelela kwisixa esikhulu somxholo ngendlela elula. Ke ngoko, kunokuba ngumdla wokubakho kumajelo wesicelo. Ngale ndlela, kukho amanye amajelo ayimfuneko, ukuze ufumane okuninzi kuyo. Ungathandabuzi ukuzibandakanya nabo ngaxa lithile.
KwiTelegram ungakwenza oko ukuba khange usebenzise iapp ixesha elide, iakhawunti yakho iya kutshatyalaliswa ngokuzenzekelayo. Singakucwangcisa ngokulula usetyenziso. Kufezekiswa ngokufaka icandelo labucala nokhuseleko kuseto lwesicelo. Nali icandelo lokuzibhubhisa leakhawunti. Kuyo unokukhetha ukuba lingakanani ixesha esifuna ukulidlulisa kwiakhawunti yethu ukuba itshatyalaliswe ngokuzenzekelayo.
Inokuba ukususela kwinyanga ukuya kunyaka. Ke sikhetha okubonakala kufanelekile kuthi kwimeko enjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Amaqhinga amahlanu okwenza iTelegram yakho ngokwezifiso kwi-Android